पाठेघरको क्यान्सर भएको कसरी थाहा पाउने ? - Arthasansar
डा. ज्योत्सना शर्मा
मंगलबार, २७ पुस २०७८, १३ : ३६ मा प्रकाशित
यो जनावरी महिना भनेको क्यान्सरको जागरुपताको महिनाको रुपमा राखिएको छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सर सातौ कमन क्यान्सर हो र यो चाहिँ महिलाहरुमा चौथोमा पर्ने गर्दछ । विकसित मुलकको कुरा गर्ने हो भने यो रोगबाट बच्नका निम्ती HPV भ्याक्सिन लगाउने गरिन्छ जुन ५ देखि १५ वर्ष उमेर वर्गका बच्चाहरुलाई २ डोज खोप र १५ देखि २६ उमेर बर्गका मानिसहरुलाई ३ डोज खोप लगाउने गरिन्छ । त्यस्तै २६ वर्ष भन्दा माथिका उमेर पुगेका मानिसहरुले भ्याक्सीन लगाएता पनि भ्याक्सीनको प्रभाव नदेखिने भएकाले संक्रमण छ या छैन भनेर परिक्षणबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ । यस भाइरसले भविष्यमा क्यान्सरको सम्भावना कति छ भन्ने कुरा परिक्षण गरेर थाहा पाउन सकिन्छ ।
कस्तो अवस्थामा यस्को परिक्षण गर्ने त कस्ता रहन्छन् यो क्यान्सरको लक्षणहरु ?
पाठेघरको मुखको क्यान्सर महिलाले असुरक्षित धेरै व्यक्तीसँग यौन सम्पर्क राखेमा, सानै उमेरमा विवाह गरेमा, सानो उमेरमै यौन सम्पर्क राखेमा, सानै उमेरमा बच्चा जन्माएमा, धेरै गर्भाधारण गरेमा, धुम्रपान गरेमा हुने गर्दछ । त्यसैले हरेक महिलाहरुले कम्तिमा वर्षमा एक पटक स्त्री रोग सम्बन्धीका डाक्टरहरुलाई भेटेर जाँच गर्न जरुरी छ । यो परिक्षणले भविष्यमा हुने धनजन र खतराबाट बचाउँदछ ।
(लेखक डा. शर्मा एभरेष्ट अस्पतालमा स्त्री रोग तथा निशन्तान विशेषज्ञको रुपमा विगत ५ वर्षदेखि कार्यरत छिन् ।)